Ziso rekatsi raSillimanite. Dzimwe nguva zvinonzi fibrolite - Vhidhiyo
Online ibwe rekuyedza sevhisi
Zvinorehwa neplatinamu zvinorevei muCambodia?
Chii chinonzi ring ring ring?
Chii chinonzi Mina Reap?
Ziso rekatsi raSillimanite
Tags Cat ziso, Sillimanite, Ziso rekatsi raSillimanite
Sillimanite katsi ziso dombo rinoreva mabhenefiti uye mutengo.
Tenga ziso rekasillimanite kati muziso redu
Ziso rekatsi raSillimanite dzimwe nguva rinonzi fibrolite nekuti makristasi ayo anowanikwa ari mumapoka, akafanana neshinda.
Sillimanite inowanikwa mumarudzi akasiyana siyana kusanganisira girini, yero, shava, bhuruu, chena uye kunyange nhema. Iyo gem inogona kuwanikwa seyechokwadi yakajeka gem, kana yakazara opaque ine waxy luster.
Cat yeziso zviitiko
Mune gemology, chatoyancy, kana chatoyance kana katsi ziso maitiro, inoonekwa yekuratidzira mhedzisiro inoonekwa mune mamwe matombo anokosha, matanda, uye kabhoni fiber. Yakagadzirwa kubva kuFrance "œil de chat", zvichireva kuti "ziso rekati", chatoyancy inomuka kubva kune iyo fibrous chimiro chechinhu, senge mune ziso rengwe, kana kubva kune fibrous inclusions kana matanda mukati mebwe, senge muziso rekati chrysoberyl. Mhedzisiro inokonzera chatoyance mu chrysoberyl ndiyo mineral rutile, inoumbwa kazhinji titanium dioxide. Kuongororwa sampu hakuna kupa humbowo hwemachubhu kana tambo. Iyo rutile inokonzeresa zvese kuenderana zvakaringana zvine chekuita nekati yeziso maitiro. Izvo zvinofungidzirwa kuti iyo lattice paramende yeiyo rutile inosangana imwe chete yematatu orthorhombic crystal axes e chrysoberyl, zvichikonzera kuenderana kwakasarudzika munzira iyoyo.
Inowanikwa pasi rese, muMyanmar (Burma), Sri Lanka (Ceylon), USA, Czechoslovakia, India, Italy, Germany, neBrazil.
Sillimanite kati ziso rekristaro zvinoreva uye kuporesa zvivakwa zvinobatsira
Ichi chikamu chinotevera ndechekufungidzira kwesainzi uye kwakavakirwa pazvitendero zvetsika.
Sillimanite katsi ziso dombo rinosimbisa hunhu hwehutungamiriri mumunhu. Ziso rekatsi raSillimanite rinobatsira kwazvo kuti munhu awedzere hunhu hwehutungamiriri. Zvinokurudzirwa kupfeka dombo iri, kana munhu achitongwa nemwedzi. Inoenzanisa manzwiro emunhu. Ziso reiyi katsi rinobatsira iye akaripfeka kutora zvakanakisa uye nehungwaru sarudzo muhupenyu. Inounza maonero ezvakarara mushure memamiriro muhupenyu hweanopfeka. Iri dombo rinounza zvine musoro uye nemuviri muviri pamwechete. Inokurudzira kupora mupfungwa.
Varapi vanogona kuwana dombo iri kubatsira kuenzanisa chakras uye iwe unogona kuona kuti kurishandisa pane chero chakra kunobatsira kuunza chese chakras mukuyanana. Iri ibwe rinobatsira varapi vekushandisa kuti vavabatsire kuona kuti mutengi wavo anoda rubatsiro rwei. Shandisa yako intuition kuti ikubatsire kusarudza kwaungaishandisa, sezvo ichizobatsira chero chakras dzaungasarudza kuishandisa pairi.
Chii chakanakirwa neziso rekatsi sillimanite?
Izvo zvakanaka kune avo vanhu vari kusangana nematambudziko eganda kana allergies. Inogona zvakare kusakadzwa neavo, vane zuva risingachinjike mumachati avo echisikigo uye kune avo vane mazuva ekuberekwa ari 1 ne8. Iyo kristaro inobvisa zvipingamupinyi uye inobvisa chero yakaipa mhedzisiro.
Ndezvipi zvakanakira ziso rekatsi dombo?
Iri ibwe rinokwanisa kurerutsa kusagadzikana kwepfungwa kunokonzerwa nekushomeka kwezvaunoda. Inogona kupedza kushushikana. Kupfeka ziso rekati kunogona kupa kufunga kwakakurumbira uye kumisazve ndangariro. Aya ese mabhenefiti akakosha edombo.
Ndeapi mabhenefiti ebwe reziso dombo?
Kupfeka dombo reziso rekati kunogona kubatsira kubata neakanyanya kudaro kupfuura kusava neruzivo, kuunza runyararo nekubatana. Inobatsira munhu kuzviparadzanisa nezvinhu zvekunamatira, achiwana kujekeswa pamweya. Simba raKetu rinogona kubatsira mukufambira mberi pamweya, kunyanya kana uri muevhangeri kana munhu anotsvaga zvechitendero.
Natural sillimanite kati ziso gemstone kukosha uye mutengo pa carat muchitoro chedu:
Ziso rekatsi raSillimanite riri kutengeswa muchitoro chedu
Isu tinoitawo tsika inogadzirwa nesillimanite katsi ziso zvishongo semabatanidzwa maringi, mitsipa, mhete dzemhete, zvishongo, zvishongo… ndapota taura nesu for quote.
Cat yeziso topazi
Tags Cat ziso, netopasi
Ziso rekati kornerupine
Tags Cat ziso, Kornerupine
Cat yeziso danburite
Tags Cat ziso, Danburite
Katsi reziso aquamarine
Tags Tria Rose, Cat ziso
Zvitsva zvitsva zviripo
Shanyira shopu yedu
musha | Matombo ekuzvarwa | Taura nesu